Umzi mveliso weeCandelo leCandelo lezaMbane-Abavelisi beCandelo laMandla e-China, abaXhasi
Iintambo ze-Fluoroplastic zihlala zisetyenziswa kwizicelo zeshishini ezinje ngolawulo oluzenzekelayo kunye neenkqubo zokulinganisa, ukufudumeza ngombane, i-Automotive kunye neAerospace. Ngenxa yozinzo lobushushu obugqwesileyo, ukuxhathisa kweekhemikhali kunye namandla oomatshini kunye ne-dielectric, ezi ntambo zeTeflon zilunge kakhulu kwizicelo ezinemithombo yeendaba enobundlobongela kwaye okanye kumaqondo obushushu aphezulu ngaphezulu kwe-105 ° C.
Intambo yokuguqula rhoqo isetyenziswa njengentambo yonxibelelwano phakathi kwamandla okuguqula amandla kunye nesiguquli sokuguqula iimoto. Kwaye ikwasetyenziselwa ukuhambisa amandla kumgca wokuhambisa umbane olinganisiweyo we-1kv okanye ezantsi.
Iintambo zemigodi zisetyenziswa kwiindidi ezahlukeneyo zezicelo zemigodi kwaye zijolise ekusebenzeni ixesha elide kwimeko enzima kakhulu, ngelixa zibonelela ngamanqanaba aphezulu okhuseleko kunye nemveliso. Ezi ntambo zibonelela ngokuguquguquka okugqwesileyo, ukungcungcutheka kunye nokuxhathisa ukutsala, ukongeza kumbane obalaseleyo wombane, iiparameter zobushushu, lingonakali kunye nelangatye ukumelana.
Intambo yerabha yohlobo lweerabha luhlobo lwentambo yerabha kwaye izinto zayo zokwambathisa ayicacanga. Intambo yerabha yesilicone ifanelekile ukuhamba okanye ukulungisa ii-wiring okanye ukuhambisa umqondiso wezixhobo zombane kunye nezixhobo ezinombane we-ac ombane 450 / 750v okanye ngezantsi. Intambo inokuzinza okuhle kobushushu. Intambo eguquguqukayo yesilicone inokugcina ukusebenza kakuhle kombane kunye nokuthamba kubushushu obuphezulu, kubushushu obuphantsi kunye nendawo enokubonakalisa. Iintambo zerabha zeSilicon zikulungele ukusetyenziswa kumbane wombane ...
Intshayelelo yeMveliso Le mveliso ilungele iikhompyuter zombane kunye neentambo zonxibelelwano ezizenzekelayo ngombane olinganiselweyo we-500v nangaphantsi ofuna ukuphazamiseka okukhulu. Intambo yekhompyuter Umphetho wamkela uhlobo lwe-K b-uhlobo lwe-polyethylene ephantsi ene-oxidation. I-Polyethylene inokumelana nokugquma okuphezulu, ukumelana namandla ombane, umlinganiso we-dielectric low kunye neqondo eliphantsi lokulahleka kwe-dielectric kunye nobunzima obuguqukayo. Ayikwazi nje ukuhlangabezana neemfuno zothumelo perf ...
Isiseko sobhedu se-PVC esigqunywe nge-PVC esongelweyo esongelwe ngokusongelwa ngentambo yolawulo sibekwe kwigumbi elikhulu lemagnethi, kwintambo, kumbhobho, wangcwatywa ngqo, waxhonywa, kwaye unokumelana nezihlandlo ezimiselweyo zoxinzelelo olukhulu.
Intambo yombane ephezulu Intambo yombane ephezulu luhlobo lwentambo yombane, ebhekisa kwintambo yombane esetyenziselwa ukuhambisa phakathi kwe-10kv-35kv (1kv = 1000v), kwaye isetyenziswa ikakhulu kwindlela ephambili yokuhambisa amandla. Imigangatho yokuphunyezwa kwemveliso yeentambo zombane ophezulu zii-gb / t 12706.2-2008 kunye ne-gb / t 12706.3-2008 Iindidi zeentambo zombane ophezulu ziintlobo eziphambili zeentambo zombane ophezulu ziintambo ze-yjv, intambo ye-vv, intambo ye-yjlv kunye nentambo ye-vlv . Intambo ye-yjv igama elipheleleyo i-XLPE i-cable ye-PVC ekhutshwe ngombane (isiseko sobhedu)
Sebenzisa iimpawu 1. Elonaqondo lobushushu liphezulu lomqhubi wekhebula yi-90 ° C. Xa isekethe emfutshane (elona xesha lide lingagqithi kwi-5S), elonaqondo lobushushu liphezulu alidluli kuma-250 ° C. 2. Iqondo lobushushu lokuma xa ubeka intambo akufuneki libe ngaphantsi kwe-0 ° C 3. Irediyasi yokuguqa evumelekileyo ngexesha lokubeka: intambo enye engundoqo ayikho ngaphantsi kwamaxesha ali-15 ububanzi bangaphandle bekhebula; intambo ye-multi-core ayikho ngaphantsi kwamaxesha ali-10 ubukhulu bangaphandle bekhebula. Ukusetyenziswa kwegama lemodeli ...
Tsala intambo yetyathanga xa izixhobo zifuna ukuhamba ukuya ngapha nangapha, ukunqanda iintambo ukuba zingarhintyelwa, zigqitywe, zikhutshwe, zixhonywe kwaye zisasazeke, iintambo zihlala zibekwa kwityathanga lokurhuqa intambo ukukhusela intambo, kunye Ikhebula linokuhamba liye ngapha nangapha ngetyathanga lokutsala. Intambo ekhethekileyo eguqukayo enokulandela ikhonkco lokutsala ukuya ngapha nangapha ngaphandle kokulula ukunxiba kuthiwa kukutsala intambo yetyathanga, ngesiqhelo kunokubizwa ngokuba kukutsala intambo, itanki chain ...
kvv, kvvp, kvvrp, kvvp2, kvv23, kvv32 Copper core PVC zigqunyiwe kwaye zihonjisiwe zalukwa iintambo zolawulo ezikhuselweyo zibekwe ngaphakathi ezindlwini. Imijelo yentambo, imibhobho kunye nezinye iimeko ezizinzileyo ezifuna ukhuselo ikakhulu zilungele indawo ezinophazamiseko oluphezulu lweempawu. Iimodeli eziqhelekileyo ezisetyenziswayo: kvv, kvvp, kvvrp, kvvp2, kvv23, kvv32